Izindaba - Ithenda yephrojekthi enkulu kakhulu yokugcina isitoreji selanga eNtshonalanga Afrika: 390MW solar + 200MW storage energy energy
Ithenda yephrojekthi enkulu kakhulu yokugcina ilanga eNtshonalanga Afrika: 390MW solar + 200MW storage energy
Umakhi wepaki yezimboni esebenzisa izinto ezixubene eTogo, eNtshonalanga Afrika uqale ithenda yephrojekthi enkulu yokugcina amandla elanga kanye namandla kagesi, futhi ipaki ikhiphe incwadi yenhloso (i-EOI). Umakhi wengqalasizinda yePan-Afrika i-Arise Integrated IndustrialPlatforms (Arise IIP) usebenza nohulumeni waseRiphabhulikhi yaseTogo ku-Adétikopé Industrial Platform (PIA), okuyindawo ekhethekile yezomnotho engamahektha angama-400 eduze nenhlokodolobha yezwe, iLomé. Indawo izokwakha isikhungo sezimboni nezokuhlinzeka ngempahla, esihlinzeka ukufinyelela eNtshonalanga Afrika ngogu.
Ukuvela kwe-IIP yakhipha isaziso ngoJulayi 8 simema i-EOI ukuthi ingeze i-200MW uhlelo lokugcina amandla ebhethri(BESS) nengqalasizinda ehlobene ne-161KVA yokuxhuma igridi yesiteshi samandla se-DC photovoltaic esinamandla angama-390MWp. Ngokwesaziso, lawa maphrojekthi "ahlinzeka kakhulu i-PIA ngamandla esikhathi eside nathembekile."
Abahlanganyeli banezinketho ezimbili, kungaba ukubhida izinkontileka zobunjiniyela, zokuthenga nezokwakha (i-EPC) kanye nokusebenza kweminyaka emihlanu nokugcinwa (O&M), noma ukusayina isivumelwano seminyaka engama-20 sokuthengwa kwamandla (PPA) ne-Arise IIP ngendlela yokubambisana. . Abafakizicelo badinga ukuba nokuhlangenwe nakho okukodwa okufanayo kwephrojekthi, futhi babe namandla wezezimali okuqala umsebenzi ngokushesha ngemuva kokuthola inkontileka, futhi babe nezinto ezanele, izinsiza zobuchwepheshe, kanye nabasebenzi abalungele umsebenzi wephrojekthi.
Imibhalo yokubhida izonikezwa phakathi kukaJulayi 20 no-30, 2021, ngemuva kwalokho kuzoba namasonto ayi-12 okuletha amabhidi. Le phrojekthi yiyona enkulu kunazo zonke ezake zamenyezelwa ezwenikazi lase-Afrika kuze kube manje. Phambilini, bekuyinombolo encaneilangakanye namaphrojekthi wokugcina amandla, kufaka phakathi amaphrojekthi axhunywe ngegridi kanye negridi encane. Amaphrojekthi wakamuva atholakala kakhulu eMadagascar, eSomaliland naseMozambique. . INingizimu Afrika iphinde yaqopha umlando ngokubhida amaphrojekthi okugcina ugesi adlula i-1GWh ukwenza amaphrojekthi wamandla avuselelekayo athunyelwe njengoba izwe lifuna ukuthenga masinyane amandla kagesi ukuze enzele ukusweleka kokuphakelwa.
I-Hangchi Technology Co., ltd inikeza yonke imikhiqizo yelanga kusuka ezintambo kuya kumabhethri, siphinde senze ngokwezifiso uhlelo lwelanga ngokusho kwamakhasimende okuphenya.
Sicela uxhumane nathi gavin@hangchisolar.com
Isikhathi Iposi: Jul-30-2021